Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0413 tal
Ny famoronana ao amin'ny bokin'i Joba
Talata 22 Jan.
Vakio ny Joba 38:1-21. Mariho ireo loha hevitra mikasika ny famoronana ao amin'ireto andininy manaraka ireto.
Zava-dehibe ny mahatsiaro ny tontolon-kevitra manodidina ny bokin'i Joba. Nihatra ny voina lehibe mahatsiravina, ka nitolona i Joba te hahafantatra hoe ahoana koa no itrangan'izao aminy, izy izay mpanara-dia mahatoky an'Andriamanitra. Manomboka eo amin'ny toko 38 ka hatrany amin'ny toko 41 ny Tompo dia manohy hatrany miresaka mikasika ny heriny enti-mamorona, ka izany rehetra izany dia ho valin'ny fanontaniana feno fangirifiriana napetrak'i Joba.
Vakio tsara ny valin-teny nomen'i Joba ny Tompo ao amin'i Joba 42:1-6. Nahoana no toy izany ny valin-teny nomen'i Joba, ary inona no azontsika ianarana avy amin'ny valin-teniny, izay afaka hanampy antsika hatoky an'Andriamanitra eo amin'ny voina mahatsiravina mihatra amintsika manokana?
Ny tsy fahafahan'i Joba manazava lafiny maro amin'ny famoronana dia nahatonga azy hiaiky ny fahalehibeazan'Andriamanitra sy hatoky Azy, na dia teo aza ny zavatra rehetra nitranga. Isika koa dia tsy mahita havaly ireo fanontaniana maro mikasika ny famoronana, ary ny ohatra navelan'i Joba dia tokony hampirisika antsika hatoky an'Andriamanitra, na inona na inona mitranga. Fanontaniana maro mikasika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana no hitoetra tsy ho voavaly, hatramin'izao aloha. Hanana ny mandrakizay isika hahazoana fanazavana mikasika ny zavatra izay toa tsy takatry ny saintsika ankehitriny.
Ny hevi-dehibe asongadina ary izany dia izao: amin'ny alalan'ireo zavatra mahatalanjona noforonin'Andriamanitra - izay mazava tsara amintsika kokoa ankehitriny toy izay amin'i Joba tamin'ny androny - dia tokony hianatra ny hatoky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny heriny mampitolagaga isika.
Isika ankehitriny, izay velona aty aorian'ny hazo fijaliana, dia mahita ny Mpahary amin'ny maha-Mpanavotra antsika nohomboana tamin'ny hazo fijaliana Azy ihany koa, zavatra izay tsy hitan'i Joba na oviana na oviana, izany hoe tsy hitany mazava tahaka ny ahitantsika azy. Ka moa tsy tokony hatoky ny hatsaram-panahin'ny Tompo amintsika ve isika, noho ny fahalalantsika izay nataony ho antsika?